January 28, 2011 by chowutyee
Posted in ဗီယက်နမ် ချက်ပြုတ်နည်းများ | 19 Comments
lane hla gyi lar….htoo san bar lar…ta kar ma eat buu bu…treat me 🙂
Surely my lovely twin! 😀
Hee Thanks Ma Chaw! 😛
လာလည်သွားတယ်… ဗီယက်နမ်ကော်ပြန့်လေးလဲ ငေးသွားတယ် 🙂
Thanksalot Ma Thet Mar!! 🙂
Thanksaton.. 😛
ဗီယမ်နမ် ကော်ပြန့်လိပ်က ခုထိ ရန်ကုန်မှာ ရှာမတွေ့သေးဘူး။ ဒီကော်ပြန့်လိပ်တောင် ၀တ်ရည် သူငယ်ချင်း ဟေမာ၊ အမေရိကာက လက်ဆောင် ၀ယ်လာပေးလို့ လုပ်စားခွင့်ရတာပါ.. 🙂